Einstein: Sidee Xalka Salesforce ee AI uu u wadi karaa Suuqgeynta iyo Waxqabadka Iibka | Martech Zone
Einstein: Sidee Xalka Salesforce ee 'AI Solution' uu u wadi karaa Suuqgeynta iyo Waxqabadka Iibka
Isniin, April 13, 2020 Isniin, April 13, 2020 Douglas Karr
Qaybaha suuq-geynta ayaa inta badan ah shaqaale la'aan iyo shaqo-la'aan - isku dheelitirka waqtiga ku saabsan u wareejinta xogta u dhexeysa nidaamyada, aqoonsashada fursadaha, iyo geynta waxyaabaha iyo ololeyaasha si loo kordhiyo wacyiga, ka-qaybgalka, helitaanka, iyo haynta. Mararka qaarkood, in kastoo, waxaan arkaa shirkado ku dhibtoonaya inay sii wadaan marka ay jiraan xalal dhab ah oo halkaa ka jira oo yareynaya ilaha lagama maarmaanka u ah kordhinta waxtarka guud.
Sirdoonka macmalka ah waa mid ka mid ah teknoolojiyaddaas - waxayna durba caddaynaysaa inay siinayso qiimo dhab ah suuqleyda sidaan u hadlayno. Mid kasta oo ka mid ah qaab-dhismeedka suuq-geynta ugu weyn wuxuu leeyahay mishiin u gaar ah AI. Iyada oo ay ku saleysan tahay awoodda Salesforce ee warshadaha, Macaamiisha Salesforce iyo Suuqgeynta Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay eegaan Einstein, Barmaamijka 'Salesforce's AI'. Inkasta oo matooro badan oo AI ah ay u baahan yihiin horumar badan, Salesforce Einstein waxaa loo sameeyay in lagu meeleeyo barnaamijyo iyo isdhaxgalka ugu yar ee iibka iibka iyo suuq geynta… ha ahaato B2C ama B2B.
Sababta muhiimka ah ee AI ay caan ugu tahay iibinta iyo suuqgeynta ayaa ah in, haddii si sax ah loo howlgaliyo, ay meesha ka saareyso eexda gudaha ee kooxaha suuqgeyntayada. Suuqyayaashu waxay u muuqdaan inay ku takhasusaan oo ay u dhaqaaqaan jihada ay ugu raaxeysan yihiin marka ay timaado calaamadeynta, isgaarsiinta, iyo istiraatiijiyadda fulinta. Waxaan badanaa ku dhex xoqnaa xogta si aan u taageerno fikirka aan kalsoonida ugu badan ku qabno.
Ballanqaadka AI ayaa ah inay bixiso ra'yi aan eex lahayn, oo ku saleysan xaqiiqda, iyo mid sii wadaya inuu sii fiicnaado waqti ka dib markii xog cusub la soo bandhigayo. In kasta oo aan ku kalsoonahay xiidmahayga, marwalba waan la dhacsanahay natiijooyinka ay soo saarto AI! Ugu dambeyntiina, waxaan aaminsanahay inay waqtigeyga iga sii daayaan, oo ii suurta gelineysa inaan diiradda saaro xallinta hal-abuurka iyadoo laga faa'iideysanayo xogta ujeeddada iyo natiijooyinka.
Waa maxay Salesforce Einstein?
Einstein wuxuu ka caawin karaa shirkadaha inay go'aan ka gaaraan dhaqso, shaqaalahana ka dhigaan kuwa wax soo saar badan, macaamiishana ka dhiga kuwo faraxsan iyagoo adeegsanaya sirta farsamada (AI) ee guud ahaan Macaamiisha Salesforce 360 ​​Platform. Waa isku xirnaanta isticmaalaha waxay u baahan tahay barnaamijyo ugu yar waxayna u adeegsataa barashada mashiinka inay qaadato xog taariikhi ah si loo saadaaliyo ama loo wanaajiyo dadaallada suuqgeynta iyo iibka mustaqbalka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo sirdoonka macmalka ah loo geyn karo, halkan waxaa ah faa'iidooyinka muhiimka ah iyo astaamaha Salesforce Einstein:
Salesforce Einstein: Barashada Mashiinka
Ka hel saadaalin badan oo ku saabsan ganacsigaaga iyo macaamiishaada.
Daahfurka Einstein - Kordhi wax soo saarka oo ku ogaato qaababka ku habboon dhammaan macluumaadkaaga, ha ku noolaado Salesforce ama dibaddaba. Soo hel fikradaha AI ee fudud iyo talooyinka dhibaatooyinka adag. Kadib, ficil ku samee natiijooyinkaaga adigoon waligaa ka tegin Salesforce.
Dhismaha Saadaasha Einstein - Saadaali natiijooyinka ganacsiga, sida qiiq ama qiimaha nolosha oo dhan. Abuur moodello AI u gaar ah oo ku saabsan goob kasta oo Salesforce ah ama shay leh qasabno, oo aan ahayn koodh.
Einstein Xiga Waxqabadka Ugu Fiican - U gudbi talooyinka la xaqiijiyay shaqaalaha iyo macaamiisha, si sax ah barnaamijyada ay ka shaqeeyaan. Qeex talooyinka, abuur xeelado ficil, dhis moodello saadaalin ah, soo bandhig talooyin, oo dhaqaaji otomaatiga.
Salesforce Einstein: Nidaaminta Luqadda Dabiiciga ah
U adeegso NLP si aad u hesho qaabab luuqadeed oo aad u adeegsan karto ka jawaabida su'aalaha, ka jawaab celinta codsiyada, iyo aqoonsiga wadahadallada ku saabsan astaantaada guud ahaan shabakadda.
Luqadda Einstein - Faham sida macaamiisha ay dareemayaan, si toos ah u marin su'aalaha, isla markaana u hagaaji socodkaaga shaqada. Ku dhis ka baaraandegidda luqadda dabiiciga barnaamijyadiinna si aad u kala-saartaan ujeeddada iyo dareenka aasaasiga ah ee qoraalka, iyadoon loo eegin luqadda.
Bootada Einstein - Si fudud u dhisto, u tababar, una gayso bots caadooyin ku saabsan kanaallada dhijitaalka ah ee ku xiran xogtaada CRM. In kor loo qaado hababka ganacsiga, loo xoojiyo shaqaalahaaga, isla markaana looga farxiyo macaamiishaada.
Salesforce Einstein: Aragtida Kumbuyuutarka
Aragtida kumbuyuutarka waxaa ka mid ah aqoonsiga qaab muuqaal ah iyo ka baaraandegidda xogta si loola socdo alaabadaada iyo sumaddaada, loo aqoonsado qoraalka sawirrada, iyo inbadan.
Aragtida Einstein - Ka eeg wada hadallada ku saabsan sumaddaada dhammaan warbaahinta bulshada iyo wixii ka baxsan. Ku isticmaal aqoonsi muuqaal caqli-gal ah barnaamijyadaada adoo tababaraya moodello waxbarasho oo qoto dheer si aad u aqoonsato astaantaada, wax soo saarkaaga, iyo inbadan.
Salesforce Einstein: Aqoonsiga Hadalka otomaatiga ah
Aqoonsiga hadalka otomaatigga ah wuxuu ku turjumayaa luqadda lagu hadlo qoraal. Einstein wuxuu qaadaa talaabo dheeraad ah, asaga oo u dhigaya qoraalkaas macnaha guud ee ganacsigaaga.
Codka Einstein - Hel xog-warranno maalinle ah, cusbooneysii, oo wad dashboodyada adigoo si fudud ula hadlaya Kaaliyaha Codka Einstein. Iyo, abuur oo soo bandhig caado kuu gaar ah, kaaliyayaasha codka ee sumadaha leh Einstein Voice Bots.
Booqo Salesforce's Einstein si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan badeecada, caqliga macmalka ah, cilmi baarista AI, Isticmaalka Kiisaska, iyo su'aalaha inta badan la isweydiiyo.
Hubso inaad la xiriirto my Shirkadda latalinta iyo fulinta, Highbridge, oo waxaan kaa caawin karnaa keenista iyo isku darka mid ka mid ah xeeladahaas.
Tags: sirdoonka macmalaragtida kombiyuutarkaeinsteinEinstein nlparagtida einsteincodka einsteinfalanqaynta sawirkafarsamaynta luqadda dabiiciga ahiibinIibiyaha Einsteinsaadaasha iibka einsteinsaadaalinta iibkawaa maxay iibka ciidanka einstein
Iskuxirnaansho: Waxaan Dhisay Websaydh Isbaanish ah oo leh Bakhaar Online ah iyo Ballan Ballan Maalin keliya